Kufambisa muManuwali Wiricheya: Ndeipi Forogo yekushandisa
No zvigadzirwa vari ngoro.
hwiricheya maneuverability inokanganiswa nezvinhu zvinoverengeka zvakaita sekuumburuka kwekupokana, huremu, chinzvimbo chekugara, chinzvimbo chemberi kumashure mune yakajairwa. mavhiripu kutaura mashoma. Nekudaro, mune ino chinyorwa ini ndichatarisa pane izvo zvinokanganisa kutendeuka kwekuita uye mashandiro inova iyo forogo sarudzo mune inogadziriswa kupeta tsika hwiricheya.
Kune maviri marudzi emaforogo evakanda, iwo akawanda-chinzvimbo maforogo uye maforogo akajairwa. Ivo vaviri vanouya munzvimbo dzakasiyana-siyana kuitira kuti vagare ma casters ehukuru hwakasiyana. Iyo forogo refu inodiwa kune akakura makasitoma, nepo pfupi forogo inopa mashoma sarudzo kune caster urefu; zvisinei neizvi, forogo ipfupi inowana diki yekushandura nharaunda uye yakawedzera kutenderera kugona ichienzaniswa neforogo refu.
hwiricheya Mberi Maforogo
Musiyano uripo pakati peyakajairika uye yakawanda-nzvimbo chinogadziriswa maforogo inoreva kuisirwa kuisirwa pova kwemasuo ekumisikidza ma casters.
Mune iyo forogo yenguva dzose, kuvhura kunotevera kutenderedza kweforogo, zvisinei mune yakawanda-chinzvimbo cheforogo, kuvhurwa kweanokanda kwakarongedzwa zvakaringana pasi. Iyo forogo uye caster inotevera system yakashinga ipapo iyo hwiricheya iri kufamba yakananga kumberi.
Kana ichidzosera kumashure, iyo forogo uye casters inotenderera ichitenderedza bhaudhi uye iri kumberi maererano nehurongwa hwakashinga. Nekuda kweizvozvo, forogo refu ichave iine yakakura kutendeuka nharaunda, yeiyo yakajairwa kana yakawanda-chinzvimbo chinzvimbo forogo.
Kukura kwe hwiricheya Forks
Chimwezve chinhu chekufunga nezvacho kana uchisarudza pakati peforogo yakajairika uye forogo inogadziriswa, mukana wekukanganisa pakati pemakanda uye matai ekumashure uye / kana tsoka dzetsoka. Nekuda kwekuti nzira iyi yakakura kana uchishandisa yekuvhura yakadzika kwazvo muforogo yakajairwa, zvichibva pahukuru hwecaster unoshandiswa pamwe nekurerekera kwemahanger uye tsoka dzetsoka, kukanganisa pakati pecaster neplate tsoka kunogona kuitika.
Iine forogo-chinzvimbo chinoshanduka forogo, iyo nzvimbo pakati pecaster nemavhiri ekumashure uye / kana tsoka yetsoka inochengetwa; zvisinei nekuti ndeipi kuvhurwa kunoshandiswa kune yepasi pasi-kune-chigaro kukwirira. Iyo forogo-chinzvimbo forogo inopawo mhedzisiro yekuchengeta rakafanana wheelbase chero ipi iyo realignment kuvhura inosarudzwa.
Sezvambotaurwa pakutanga kwechinyorwa chino, sarudzo yemunhu forogo inogona kunge iri sarudzo iri nyore; zvakadaro, mhedzisiro yayo pakushandura kushanda uye kuita kwese hakufanirwe kufuratirwa.